Guuldaro taariikhi ah ayey la kulantay Liverpool kadib markii Aston Villa uga badisay 7-2… – Hagaag.com
Guuldaro taariikhi ah ayey la kulantay Liverpool kadib markii Aston Villa uga badisay 7-2…
Posted on 5 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Guuldaradii taariikhiga ahayd ee Liverpool kala kulantay Aston Villa 7-2 kulan ka tirsan horyaalka England Premier League ayaa xumaysay farxada xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah, oo ah gooldhaliyaha ugu sareeya Liverpool, guulihiisii ​​weynaa ee uu ka gaaray ka gudbida dhalinta 100-ka gool.
Salah ayaa dhaliyay labada gool ee Reds ee ciyaartii Liverpool la yeelatay Aston Villa fiidnimadii Axada, dhibcihiisa goolasha ayaa gaaray 101 gool isaga oo dheelay 177 kulan, isagoo 99 gool u dhaliyay Liverpool halka uu 2 gool keliya u dhaliyay Chelsea.
Salah ayaa kor u qaaday goolashiisa isaga oo ka dhigay 5 gool isaga oo ku jira kaalinta 3-aad liiska gooldhalinta Premier League xilli ciyaareedkan isaga oo hal gool ka dambeeyo weeraryahanka kooxda Everton Dominic Calvert Lewin iyo xiddiga Tottenham ee Heung-Min Son.
Goolasha Salah ayaa ka qayb qaatay Liverpool inay hanato Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore, ka dib markii uu khasnadeeda ka maqnaa 30 sano koobka, guul weyn oo taariikhi ah ayey u aheyd Reds iyo tababarahooda reer Jarmal, Jürgen Klopp.
Dhinaca kale ciyaarihii La Liga Barcelona ayaa Barbardhac 1-1 ah la gashay kooxda Sevilla Axaddii ee tartanka horyaalka Spain.
Kulamada kale ee la ciyaaray Real Madrid ayaa 2-0 ku garaacdo Levante, Osasuna oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Celta Figo isla natiijadaas, iyo Deportivo Alaves oo garoonkeeda kula ciyaartay Athletic Bilbao 1-0, halka Cadiz ay barbaro 1-1 ah la gashay Granada.
Natiijadaas, Barcelona waxay lumisay labadii dhibcood ee ugu horreeyay ee tartanka horyaalka, taasoo ay ku doonayso inay dib ula soo noqoto qaadashada koobka horyaalka ee ay lumiyeen xilli ciyaareedkii hore.